5 Qaab oo dabiici ah oo lagula dagaalamo Shiirka Afka - Aayaha
Home»ARIMAHA BULSHADA»5 Qaab oo dabiici ah oo lagula dagaalamo Shiirka Afka
Warka wanaagsan ee aan maanta idiin heyno ayaa waxa uu yahay in labaabi’in karo shiirk ama urka afka.
shiirka afka waa xaalad xun waxayna saameeysay 30% dadka dunida ku nool.
Waxaad idiin heynaa qaabab macquul ah oo lagu baabi’in karo ama lagu yareyn karo.
Hoos ka aqriso:-
1. Saliida Aloe Vera
Saliidda Aloe Vera waxaad u isticmaali kartaa afkaaga si ay ula dagaalanto jeermiska iyo shiirka afka, si fudud kululeey biyo yar waxaadna ku dartaa saliidda markii ay qaboowdo ama waxaad kale ood ku dari kartaa saliid lagu magacaabo peppermint.
2. Biyo badan cab
Biyo badan cab kuna luq luqo biyo qaboow, tani waxay kaa caawineysaa in uu nadiif noqdo afka.
3. Shaaha cagaaran
Baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in shaaha cagaaran uu hoos u dhimo shiirka afka ama urka maadaama uu kahor tago jeermiska, tanina waa qaab wanaagsan ood uga hortagi kartid ama aad iskaga daaweyn kartid shiirka afka.
4. Kuluq luqashada saliid qumbaha
Saliid qumbaha oo afka lagu qabto ku dhawaad 15 daqiiqo waxay bixineysaa jeermiska ku qarsan afka si aad u heshid neef wanaagsan ama shiirka afka uu meesha uga baxo isticmaal.
Sanjabiisha waxay leedahay faa’idooyin caafimaad oo farabadan iyadoo sidoo kale faa’ido badan uleh qurxinta jirka waxaa loo isticmaali karaa baabi’inta shiirka afka iyo nadiifinta carabka, jab yar oo sanjabiil ah ayaa ku dareysaa liin waxaadna afka ku qabaneysaa 15 daqiiqo si shiirka afka ay ubaabi’iso.
5 Faa'ido oo qurxinta jirka ay u leedahay Saliid Qumbaha
PHOTOS: Indian Hindus Drinking Cow Urine To Ward Off Coronavirus
Farriimo jacayl oo loogu talagalay gabar aad jeceshahay
Common lies we all tell during job interviews